Kedu ihe na etu esi emepụta guyo | Netwọk Mgbasa Ozi
N'oge mgbasawanye nke oke osimiri, a na-emepụta ụfọdụ mmiri n'okpuru mmiri. Dị ka anyị hụrụ na ọkwa ọzọ banyere oke osimiri, ha bụ ugwu ugwu dị n'okpuru mmiri. Na nke a anyị ga-ekwu maka ya ndị guyots. A kọwawo usoro usoro mbara igwe ndị a n'ihi echiche nke ịgbasa oke osimiri.
Chọrọ ịma ihe guyots bụ na usoro usoro mbara igwe nke sitere na ha?
1 Nkọwa nke guyots
3 Olee otu esi hiwe ya?
4 Nkwupụta Guyots
Nkọwa nke guyots
N’oké osimiri ahụ, e nwere ọtụtụ mbara ala a kpụrụ kemgbe ọtụtụ afọ. Anyi aghaghi icheta na usoro ndi a nwere oge ha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, o zughi ọtụtụ iri afọ ma ọ bụ ọtụtụ narị afọ gafere, kama ọtụtụ nde afọ. Mgbe ndị ọkà mmụta sayensị malitere ịchọpụta otú mmiri si asọ n'oké osimiri, ha hụrụ usoro ndị na-esighị ike ịmata. Ọ bụ maka guyots. Ha bụ ọdụ ụgbọ mmiri nke elu ụlọ ha dị larịị. Usoro a dị egwu na-egosi na oke osimiri niile.
Ndị ọkà mmụta sayensị na-agba mbọ ịkọwa mbido guyots na elu ụlọ ya nke mịrị amị. Ha eruola na nkwubi okwu na, ka afọ gara aga, ike oke osimiri na - asọ ya. N'ime oke osimiri na oke osimiri enwerekwa mbuze. Ọ bụghị otu ụdị mbuze dị ka enwere ike ịdị n'elu ụwa, osimiri na ọdọ mmiri, mana ọ na-eme oge.
Ndị Guyots sitere na mgbawa ugwu ma hụla ha na omimi nke ihe ruru 4000 mita.
Nkọwa nke na-ekpughe nhazi nke ụgbọ mmiri ndị a bụ onye ọkà mmụta sayensị bụ Harry Hammond Hess. A maara onye sayensị a dị ka otu n'ime ndị nna nna ntọala tiori tectonics. Ozizi dum gbasara mgbasa nke oke osimiri bụ nke onye sayensị a. A mụrụ ya na May 1906 wee jisie ike ịkọwa mmekọrịta dị n'etiti arches nke agwaetiti ahụ, nnabata ike ndọda nke mmiri mmiri, na peridotite nke agwọ, na aro na ibute uwe elu ụwa bụ ihe na-akpali usoro a.
Ka ọ na-erule afọ ndị XNUMX ọ nwetala ọtụtụ ihe ndekọ na mmiri mmiri. Site na ọtụtụ ihe ọ ga-amụ, ọ na-enwe ike ịkọwapụta usoro nke usoro a ga-amata nke nwere ike ịmịcha ọnya ịnyịnya ibu. Ọ bụ ndokwa magnetik nke nkume dị ka ọrụ nke ndọta magnet. Ka magnetọ a na-agbanwe, ọ bịara hụ otú e si hazie ụfọdụ nkume n'akụkụ nke ọzọ na nke ọzọ. Nke a mere ka o chee na oke osimiri na-agbasa.
N'ihi ihe ndị a Hess rụzuru, enwere ike wulite echiche nke plate tectonics na 1968.
Hess nyere nkọwa maka nguzobe nke guyots. Ọnụnọ ya bụ n'ihi ọrụ nke ugwu mgbawa ndị dị na oke osimiri. Mgbe ugwu mgbawa na-arụ ọrụ nwa oge, epupụta ihe buru ibu iji mepụta guyot.
Oke osimiri ahụ na-agbasawanye ma hapụ usoro ndị a ka ugwu mgbawa na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ma na-esi na axis nke riiji ahụ pụọ. Mgbe ugwu mgbawa si n’elu ugwu ahụ pụọ, ọrụ mgbawa ahụ kwụsịrị, ọ ga-ajụkwa oyi. Mgwakota agwa na-ebuwanye ibu ma na-emikpu. Guyot ahụ na ihe ndị ọzọ eburu, ma ọ gafere ebe ọrụ ebili mmiri na ebili mmiri na-emebi elu ya ma hapụ ikpo okwu. PEnwere ike ịchọta ha ruo mita 4000 miri emi.
E nwere ike ikwenye n'echiche nke nguzobe nke guyots. Nke a bụ n'ihi na ahụrụ fọk nke anụmanụ benthic na-ebi n'ime ogbu mmiri. Achọtara Guyots na Afar Triangle, nke dị n'okpuru oké osimiri, n'oge ụfọdụ abanyela ya.
Dika onu ogugu nke udiri ihe na ridges adighi adi mgbe nile, enwere uzo di nkpa. Enwere guyots nwere ogologo dị iche iche na ụgbọelu nke ha nke axis of rotation. Akụkụ nke guyots na-eto eto karịa ndị ọzọ.
Ọdịiche nke usoro ndị a nwere ike ịchọta n'otu akụkụ na nke ọzọ nke riiji. Ọmụmaatụ, efere Africa na-eto 1,3 cm kwa afọ, ebe North America naanị 0,8 cm. Nke a na - eme ka guyots nke na - etolite na efere dị iche iche were rụọ ụlọ dị iche iche. Ihe ha niile nwekọrọ ọnụ bụ elu ụlọ kwụrụ ọtọ site n ’ikuku mmiri nke ikuku na-erusi.
Ọ bụrụ na elu ugwu nke ugwu mgbawa na-anọ ogologo oge na ebili mmiri nke ebili mmiri, ọ ga-adị n'ụzọ dị iche karịa ma ọ bụrụ na ọ bụ obere oge. Oge a dabere na ọsọ ọsọ nke kọntinent ụwa na-agagharị ebe a na-emepụta guyot. Enwere ike ịsị na ha anaghị arụ ọrụ, ugwu na-agbawa agbawa na ochie na-anọgide dị ka obere "ihe ncheta" nke oké osimiri. Na mgbakwunye, ha na-enye oke ozi gbasara afọ nke okwute na ngwakọ na nhazi nke oke osimiri site na ọtụtụ nde afọ gara aga.
A na-akpọkwa ‘Yantarnaya guyot site na aha guyot Amber na ntụgharị bekee. Ọ bụ otu n’ime mmiri kachanụ n’oké osimiri niile. Ọ dị na Pacific Ocean ma ọ bụ nke Sala y Gómez Submarine Range. Ọnọdụ ya dị ihe dịka 150 km ọdịda anyanwụ nke Osimiri Zasosov.
Nchoputa ya bu ihe omuma ndi ozo nke mejuputara enyemaka nke ugwu ugwu Sala y Gómez. Achọpụtara ya site na nyocha azụ na oke osimiri nke Soviet Union. Ndị otu ndị ọkà mmụta sayensị a mere njem ọtụtụ oge gaa na mpaghara ụgbọ mmiri nke 18 nke ụgbọ mmiri sayensị Prọfesọ Shtokman chọpụtara guyot Yantarnaya n'etiti ọnwa March na June 1987.
Anyị nwekwara ike zute oke mmiri Anakena. Ọ bụ ama nke enyemaka nke oke osimiri nke Oke Osimiri Pasifik, nke pụtapụtara n'ime Anakena Submarine Mountain Range, na gburugburu Eastern Eastern Ridge, n'ime mpaghara akpọrọ "Rano Rahi Seamount Field".
Dị nnọọ ka ugwu ndị ọzọ a ma ama dị na mbara ala, ka a na-enwekwa n’ọhịa mmiri. Site na ozi a ị ga - enwe ike ịghọta ihe niile metụtara guyots na ọzụzụ ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Kedu ihe na kedu ka esi hibe guyots?
Oke ihu igwe ihe ijuanya nke ga-eju gị anya